NYAYA YENYULEE YENYAYA YENYU YOKUDZIDZA (A1-A2-B1-B2-C1-C2)
ZVII ZVAKAITIKA ZVEMAZWI EMITAURO ZVINOTAURWA Zvedare reEurope (A1-A2-B1-B2-C1-C2)
Pazasi pane zvirevo zvakajairika zvakatorwa kubva kuCustom Criteria yeKanzuru yeEurope. Kubudirira kwemudzidzi mune yekumwe mutauro kudzidza maitiro kunotsanangurwa neakakosha, akazvimiririra uye anokwanisa mitauro yekushandisa tsananguro inotsanangurwa muA1-C2 budiriro nhanho.
Unogona kunzwisisa zvese zvakaverengwa kana kunzwa pasina kunetseka. Zvakanyorwa uye kutaurwa
pfupisa ruzivo rwakanangana nezvakapihwa uye zvikonzero zvavo uye tsananguro panguva ino.
inogona kutaura zvakare nenzira inonzwisisika. Kuzviratidza pachako zvakasununguka, zvakatsetseka uye zvizere
uye tora pfungwa kune misiyano isinganzwisisike yezvinoreva muzvinhu zvakaoma.
Unogona kunzwisisa akasiyana magwaro akaomarara, akareba uye zvakare kunzwisisa zvisina kujeka zvinoreva.
Taura pachako zvakasununguka uye zvakatsetseka pasina kutsvaga mazwi kazhinji.
unokwanisa. Mutauro unoshanda uye wakakodzera muhupenyu hwevanhu, hunyanzvi kana hwedzidzo.
Unogona kushandisa. Achizviratidza zvakajeka, nenzira kwayo uye zvakadzama pazvinhu zvakaoma
panguva ino, uchishandisa akasiyana maturusi zvichienderana nekuvimbika kwechinyorwa.
Unogona kunzwisisa zvemukati zvemanyoro akaomeswa pane kongiri uye zvisingabvumirwe misoro
anokwanisa zvakare kunzwisisa nhaurirano mumunda wake wehunyanzvi. Vatauri vemo
zvakasikwa uye zvakatsetseka pasina kushanda nesimba pamativi ese.
Taura maonero avo pane imwe nhaurwa yakajeka nenzira yakajeka uye yakajeka.
taura zvaunofunga pamubvunzo wazvino
uye inogona kuratidza zvakaipa zvayo.
Ruzivo rwekutanga, kana uchishandisa mutauro wakajairika (Standardsprache), uye mhuri, chikoro,
Unogona kunzwisisa kana zvasvika pazvinhu zvinozivikanwa senge nguva yekuzorora. Yakagadzirwa
Unogona kusangana nemamiriro ezvinhu akasangana nawo mumunda mutauro panguva yekufamba. Inozivikanwa nyaya uye
kuzviratidza nenzira yakapfava uye yakabatana nezve zvido zvako
unokwanisa. Iye anogona kupa ruzivo nezve ake ezviitiko uye zviitiko, zviroto zvake, tariro uye
tsanangura zvinangwa zvavo, ipa zvikonzero zvipfupi nezvezvirongwa nemaonero, kana
Inogona kuunza tsananguro.
Mitsara yakabatana zvakananga kune zvinoreva chidzidzo uye anowanzoshandiswa mazwi
nzwisisa mafomu (ruzivo nezve iye uye mhuri, kutenga, basa, padhuze nharaunda, nezvimwewo). Zvakareruka
uye vanogona kutaura mumamiriro ezvinhu akajairika. Saka mune inozivikanwa uye inowanzo sangana nenyaya,
Inogona kushandisa yakapusa uye yakanangana kutaura uye ruzivo. Zvinoenderana nezvinodiwa zvekutanga
zvakapusa self, chinzvimbo chedzidzo, nharaunda uye zvinhu.
Unogona kutsanangura nzira.
Mazita anozivikanwa uye akajairwa anoitirwa kusangana nekongiri zvinodiwa uye
vanogona kunzwisisa uye kushandisa mitsara yakapusa. Unogona kuzvizivisa iwe nevamwe uye
bvunza vamwe vanhu mibvunzo (semuenzaniso kwavanogara, vanhu vakaita sei
izvo zvavanoziva kana zvavanazvo) uye mhinduro kumibvunzo yakadaro
anogona kupa. Kana munhu wauri kutaura naye achitaura zvishoma nezvishoma, zvakajeka uye kubatsira
inokwanisa kutaura zviri nyore kana yagadzirira kuzviita.
Iwe unogona kunyora chero mibvunzo uye makomendi nezve edu eGerman zvidzidzo pane almancax maforamu. Yese mibvunzo yako ichapindurwa nevadzidzisi vealmancax
mitauro yemitauro a1 a2 b1 b2 c1 c2Mazinga emitauro yeEurope